Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in ay diyaar u yihiin qaxootiga Dhadhaab - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeMadaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in ay diyaar u yihiin qaxootiga Dhadhaab
June 8, 2016 Abdi Omar Bile Home, Somalia 0
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay inuu aqbalo qaxootiga ka imaanaya xerada Dhadhaab sidoo kalena ay ka qaybqaadan karaan dib u dhiska dalka.
Isagoo ka hadlayay shir jaraaid oo ay madaxtooyada Nayroobi si wadajir ah ugu wada qabteen Madaxweynaha Kiinya Uhuru Kenyata, hoggaamiyaha Soomaaliya ayaa sheegay in dib u celinta ay noqon doonto mid si wanaagsan loo agaasimayo.
Madaxweyne Xasan ayaa sheegay in qaxootiga ay mar hore sii doorteen meelaha ay rabaan in ay degaan, wuxuuna intaas ku daray in dowladiisa ay ka samayn doonto meelahaas kaabayaal si ay u degaan.
Wuxuu uga mahadceshay Kiinya matrigelinta ay siisay qaxootiga Soomaaliyeed mudada 25 sanno ah.
Wuxuu sheegay in qaxootiga ay kaalin weyn ka qaadan doonaan dib u dhiska Soomaaliya, iyagoo waxbarasho fiican ka helay Kiinya.
June 7, 2016 Madaxweyne Xasan iyo Uhuru oo wadahadal ku yeeshay Nayroobi